အဖွင့်ပွဲရှုံးတဲ့ အီဂျစ် ၊ နယူးကာဆယ် ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ် ၊ ထရာအိုရေး အတွက် စပါးနဲ့ ပြိုင်မယ့် ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အဖွင့်ပွဲရှုံးတဲ့ အီဂျစ် ၊ နယူးကာဆယ် ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ် ၊ ထရာအိုရေး အတွက် စပါးနဲ့ ပြိုင်မယ့် ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ က ကစားသွားခဲ့တဲ့ အာဖရိက နိုင်ငံများဖလား ပြိုင်ပွဲရဲ့ အုပ်စု အဆင့် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဆီရီယာ လီယွန် အသင်းဟာ လက်ရှိ ချန်ပီယံ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အသင်းနဲ့ ဂိုးမရှိ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲမှာ ဆီရီယာ လီယွန် ဂိုးသမား ဟာ ဂိုးပေါက် ကာကွယ်မှု ၇ ကြိမ်တိုင် ပြုလုပ်ပြီး အသင်းရဲ့ သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အခြားပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဆူဒန် နဲ့ ဂီနီယာ ဘစ်ဆို တို့ ဂိုးမရှိသရေ ကျခဲ့ကြပြီး ဂါဘွန် ကတော့ ကိုမိုရိုစ့် အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှု အရှိဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီဂျစ် နဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယား တို့ရဲ့ ပွဲမှာတော့ နိုင်ဂျီးရီးယား က အီဂျစ် ကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရပြီး ၃ မှတ် စတင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နိုင်ဂျီးရီးယား ရဲ့ အနိုင်ဂိုး ကိုတော့ လက်စတာ တိုက်စစ်မှူး အီဟီရာနာချို က သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၈ ရဲ့ ရွှေ့ဆိုင်းပွဲ တပွဲ ဖြစ်တဲ့ ဆောက်သမ်တန် – ဘရန့်ဖိုဒ့် ပွဲကို မနေ့ညက ပြန်လည် ကစား ခဲ့ပြီး ဆောက်သမ်တန် က ၄-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေ မှာတော့ နောက်ခံလူ ရှာဖွေ နေတဲ ချဲလ်ဆီး ဟာ စပါး အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ် နေတဲ့ ဝုဗ် တောင်ပံ ကစားသမား အာဒမာ ထရာအိုရေး ကို အပြိုင် ကမ်းလှမ်းဖို့ စိတ်ကူး လာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်းထွက် နေတဲ့ လိုင်ယွန် ကွင်းလယ်လူ ဘရူနို ဂွီမာရက်စ် ကတော့ သူ့ရဲ့ အပြောင်း အရွှေ့ ကိစ္စ အ၀၀ ကို အေးဂျင့် ဖြစ်သူ နဲ့ လွှဲအပ် ထားပါတယ် လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကတော့ ဝက်စ်ဘရွန်း အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ဘရာဇီး ဘယ်နောက်ခံ ကစားသမားလေး လီနို ဒါခရုဇ် ဆိုဆာ ကို ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာ သွားခဲ့ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် လူငယ်လေး ဘာလိုဂန် ကတော့ မစ်ဒယ်ဘရော့ အသင်းဆီ အငှား နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အတွက် ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ်ပြီးစီး သွားခဲ့ပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဂိုးသမားလေး ဟန်ဒါဆင် ဟာ ဇန်နဝါရီမှာ အသင်းသစ် တခုခု ထံ အငှား ထွက်ခွာ လိုပေမယ့် ယူနိုက်တက် ဘက်က ဟန်ဒါဆင် ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် ဟာ လင်ဂတ် ကိုတော့ ရွေးချယ် ခွင့်ပေးထားပြီး အင်္ဂလန်သား ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်း မပြောင်းဖြစ်ပါက နွေရာသီ မှာ အင်္ဂလန် ပြင်ပ ကို ထွက်ကစားဖို့ စိတ်ကူး ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ ကတော့ ဘာစီလိုနာ ကနေ ခေါ်ယူ ထားတဲ့ ဖိလစ်ပီ ကေ်ာတင်ဟို ကို မိတ်ဆက် သွားခဲ့ပြီး ကော်တင်ဟို ဟာ အသင်းမှာ နံပါတ် ၂၃ ကို ဝတ်ဆင် ကစား သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကော်တင်ဟို ဟာ လာမယ့် ပိတ်ရက်မှာ ကစားမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲမှာ စတင် ပါဝင်ဖွယ် ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဗီလာ ဟာ အဲဗာတန် ဘယ်နောက်ခံလူ လူးကပ်စ် ဒင်း ကိုလည်း ပေါင် ၂၅ သန်း နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပြီး အသင်းရဲ့ ရှေ့တန်းလူ အယ်ဂါဇီ ကတော့ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းပြောင်းသွားဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
စပါး အသင်းကတော့ ဒယ်လီ အလီ ၊ ဒိုဟာတီ နဲ့ အန်ဒွန်ဘီလီ တို့ အတွက် ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ကို နားထောင် သွားဖို့ ပြင်ဆင် ထားပြီး ဦးစားပေး ပစ်မှတ် ထရာအိုရေး အပြင် တိုက်စစ် ကစားနိုင်သူ ၂ ဦးကို ခေါ်ယူ အားဖြည့် သွားဖို့ စီစဉ် လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းဟာ ဘန်လေ တိုက်စစ်မှူး ခရစ်စ် ဝုဒ် ကို ပေါင် ၂၅ သန်း ဝန်းကျင် နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အသင်း ၂ သင်း အကြား သဘောတူညီမှု ရရှိ သွားခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ ကလပ် အူဒီနီးစ် အသင်းဟာ အာဆင်နယ် ကစားသမား ပါဘလို မာရီ ကို အငှား နဲ့ ခေါ်ယူပြီး လုပ်ခ လစာ အချို့ ကို ပေးချေ သွားဖို့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ အဆိုပါ အငှား စာချုပ်မှာ အပြီးသတ် ဝယ်ယူခွင့် မပါရှိဘူးလို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရိုးမား ကတော့ ပေါ်တို ကွင်းလယ်လူ ဆာဂျီယို အိုလီဗီယာရာ ကို အငှား + အပြိးသတ် ဝယ်ယူခွင့် နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ကြောင်းကို ဒီကနေ့မှာ ကြေညာဖို့ ရှိနေပြီး ရီးရဲ ကနေ အငှား လာကစားနေတဲ့ ဘိုဂျာ မာယိုရယ် ကတော့ ရိုးမား ကနေ ထွက်ကာ ဂီတာဖေး အသင်းဆီ အငှား ပြောင်းရွှေ့ မယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ ယူဆပ် ဒီမာ ရဲ့ အငှား စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် လူငယ်လေး ဟာ ရက်ပစ် ဝိုင် အသင်းဆီ ပြန်သွားခဲ့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကစားသမားသစ် ဖာရန် တောရက်စ် ကတော့ ကျောနံပါတ် ၁၉ ကို ဝတ်ဆင် ကစားသွားမယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမား ဖြစ်တဲ ၅၄ နှစ် အရွယ် ဂျပန် ကစားသမားကြီး ကာဇူယိုရှီ မီယူရာ ဟာ ဂျပန် စတုတ္ထတန်းလိဂ် ကလပ် တသင်း ဖြစ်တဲ့ ဆူဇူကာ အသင်းနဲ့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုကာ ဘောလုံး ဆက်လက် ကစားသွားဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article ဇန်နဝါရီ ပထမဆုံး ကစားသမား ခေါ်ယူမှု အဖြစ် ဝက်စ်ဘရွန်း ဘယ်နောက်ခံလူကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်
Next Article ယူနိုက်တက်မန်နေဂျာသစ် အဖြစ် ရန်းနစ်ရဲ့ နေရာကို အစား၀င်လာစေချင်တဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် နည်းပြ ၂ ဦးကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ပေါလ်စခိုးလ်